ဤ blog ၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကုဒ်
6 ဤ blog ဖို့စဉျးစားသော Comments မဟုတ်ပါ IS AN သတင်းအချက်အလက်များထိန်းအကွပ်မဲ့လာ "botched" ။ Nope !.
1) ဤဘလော့ဂ် (www.solitariosinvisibles.org) ဒါဟာအခြေခံတဲ့လူမှုရေးမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်သည် လင်းမြင်သာမှု၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူများ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ခိုင်မာအောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအားဖြင့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်.
2) ဤဘလော့ဂ် (www.solitariosinvisibles.org) သတ်မှတ်ပေးသည်နှင့်ကြီးပြင်းနှိုင်းယှဉ်အဆိုပါကန့်သတ်, အတွင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအထူးသဖြင့်သူများ, အတိတ်တွင်ရောင်ပြန်ဟပ်သို့မဟုတ်ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်အကြောင်းအရာထဲမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားသူများအဆိုအရ၎င်း၏လွှမ်းခြုံသတင်းစာပညာအတွက်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနိုင်ငံရေး, လူမှုရေး, လေ့လာမှုမှာဖြစ်စေ, အကျိုးစီးပွားအကြောင်းအရာများအကြားပြေး တောက်ပဇာတ်စင်ယနေ့။
3) ဤဘလော့ဂ် (www.solitariosinvisibles.org) ဖော်ထုတ်မရ ကြောင်းမိတ်ကပ်အပါအဝင်မည်သည့်အုပ်စု, အသင်းအဖွဲ့, အုပ်စုတစ်စုသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်သူ့ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနှင့် desenmarcarar မှားယွင်းသောနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသတင်းအချက်အလက်ထံမှသင်တို့တားစီးနိုင်သည့်နိုင်ငံရေးအင်အားစု, အုပ်စုတစ်စု၏လုပ်ရပ်များအားဖြင့်ယိုယွင်းစေသည့်ရှုပ်ထွေး, သတင်းအချက်အလက်လမ်းကြောင်းများ၏အီမှတဆင့်လွတ်လပ်စွာပင်လယ်ကူးအတူ။
4) ဤဘလော့ဂ် (www.solitariosinvisibles.org) ကြင်နာမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများနှင့်တောင်းဆို, အမြင်အချို့အကောင့်သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အသုံးအနှုန်းတွေ, vulgar အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဘဲ, အတွေ့လိမ့်မည်သည့်အင်တာနက်ကိုမိုဃ်းတိမ်ကိုမှလေးစားမှုနှင့်ခုန်၏မရှိခြင်း ၎င်းတို့၏, ရှက်စရာမိုက်မဲနှင့်ခေါင်းမာလွန်းသောအသံများအာဟာရချို့တဲ့ပဲ့တင်သံတွေ share ဘယ်တော့မှတောင်မှကျနော်တို့လျှင် ထိန်းသိမ်းထားဖို့တာဝန် နှင့်မည်သည့်ကွာဟမှု play, ဒါပေမယ့်ဒီဒစ်ဂျစ်တယ် platform ပေါ်တွင်ဖြစ်ရန်အတွက်အသိပညာနှင့်အတူဆန့်ကျင်ပါဘူး။
5) ဤဘလော့ဂ် (www.solitariosinvisibles.org) သတင်းအချက်အလက်ဝေမျှခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းများအတွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ကန့်သတ်ချိန်ညှိခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်အရေးတကြီးလိုအပ်အတွက်နောင်တမှအစေခံတစ်ဦးကလူမှုရေးသဘောသဘာဝသူတို့အား မှလွဲ. ဖိအားလုပ်ကွက်ဖွဲ့စည်းရန်မည်သည့်ကြိုးပမ်းမှုရှောင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဆန့်ကျင်ဘုံမျက်နှာစာ.
6) ဤဘလော့ဂ် (www.solitariosinvisibles.org) တာဝန်မယူ ၎င်းတို့၏ထုတ်လွှင့်သည့်ဒေသများတွင်၎င်း၏ပြိုင်ဖက်များကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ထင်မြင်ချက်များ။ စကားလုံးများနှင့်သံသယရှိတိမ်းညွတ်ခြင်းနှင့်မျှတမှု၏အခြားခုံးတွ play ဖို့ temerity သို့ကျသွား၏မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ရပ်မှာတော့ဘလော့ဂ် entry ကိုနှင့်အစီရင်ခံငြင်းဆန်ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။